Qaabka Naqshadeynta Webka: Waxyoon loogu talagalay Madaxa Hal-abuurka ah | Abuurista khadka tooska ah
Isticmaalka naqshadaha websaydhku waa isbeddel, taas oo lama huraan ah in ay sii kordhayso caan sida ayaamaha u socdaan oo ay tahay in qayb weyn oo ka mid ah isbeddelladani ayaa kor u kacaya horumarka farsamada awgeed taas oo u oggolaaneysa adeegsadaha inuu aad u sii kordho xarumaha ka tirsan fasalkan websaydhyada.
Maanta waan arki karnaa sida ugu dhow "qof kasta oo dhinta”Waad geli kartaa degel internet adigoon dhibaato kale ku dhicin Waa geeddi socod dhacda ilbidhiqsiyo, kaas oo waliba u oggolaada adeegsadayaasheeda inay ku raaxaystaan ​​madadaalada ama cilmi baarista isla markiiba, run iyo bilaash.
1 Siyaabaha loo waxyoodoyo marka la abuurayo madax
Siyaabaha loo waxyoodoyo marka la abuurayo madax
Qaar badan, degelladu waxay noqon karaan meelo aad u fudud, sida shabakad bulsheed ama baloog leh macluumaad xoogaa muhiim ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado, inkasta oo aysan u muuqan inay ka sii adag tahay, degellada noocan ahi waxay hirgeliyaan farsamooyin badan horumarka madaxaaga.
Madaxa waa wajiga koowaad ee aan ku aragno bog internet, waa taas qaab-dhismeedka aan ka arki karno xagga sare ee bogga. Doorka madaxyadan ee shabakada ayaa go'aamin kara in isticmaalehu isla markiiba sii joogi karo ama ka tagi karo bogga internetka. Sababtaas awgeed, madaxyadu waxay noqon karaan cunsur aad muhiim u ah marka la naqshadeynayo.
Dareenkan, waxaan halkan ku soo bandhigi doonnaa xoogaa tilmaamo ah dhiirigelin ku jirta cinwaanka shabakadda, habkaas oo uu adeegsaduhu u dooran karo cunsurradan marka uu samaynayo madaxyada boggooda.
Sawirradu waa cunsurrada ugu isticmaalka badan madaxyada. Haddii aan ka mid noqonno xulashooyinkayaga cinwaanka websaydhka, waxaa lagugula talinayaa inaanan isku dayin inaannaan culeys ka saarin. Karaa fuliyaan faahfaahin yar taas oo madaxdeena ka dhigaysa wax ka duwan, tani waxay noqon kartaa midab dhalaalaya, sawir dheeri ah ama qayb sawir ah oo soo jiidata dareenka dadka soo booqda.
Waxay muhiim u noqon doonaan wax kasta oo la xiriira isdhexgalka aan la leenahay martideena.
Qaababku waxay ka dhigayaan bogga wax uun dabeecad leh, sidaa darteed, waa muhiim in maskaxda lagu hayo nooca daabacaadda inaad rabto inaad siiso madaxeena marka aad horumarinayso qaababka tilmaamaya. Hadday tahay khadadka ama tirooyinka xad-dhaafka ah, waa inaan tixgelinno faahfaahin aad u adag oo ku saabsan soo-jeedinta websaydhka si loo sameeyo bandhigyadan.
In la abuuro qaabab, waa lagama maarmaan in la helo casharro dhowr ah waxaa laga heli karaa webka.
Asalka cinwaanka websedku wuxuu u eg yahay inuu matalo sawir tanina uma baahna aqoon dheeri ah oo aan ka ahayn tan tafatir asalka cinwaankayaga.
Way ku habboon tahay in la helo sawirkaaga, wax aan kaliya haysanno oo taas, marka loo eego macnahaas, cinwaankayagu wuu soo bandhigi karaa, isagoo dabeecad ka sii yeelanaya kumanaan iyo malaayiin ka jira webka maanta. Haddii kale, waxaa jira tiro badan bangiyada sawirka web, kaas oo loo isticmaali karo noocyo kala duwan oo bogag internet ah, iyadoo la tixgelinayo dhadhanka iyo isbeddellada qaarkood.
Haddii aadan ku qanacsaneyn sawir, waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan inaad la tashato fiidiyoow, oo aan sidoo kale ku dhejin karno cinwaankayaga, habkaas oo ah, marka isticmaalaha uu soo galo boggan, fiidiyowgu waa waxa ugu horreeya ee uu arko.
Fiidiyowgu wuxuu noqon karaa mid aad u dheer, laakiin ma doonaysid inaad ku koobnaato hal sawir midkoodna. Kadib, ikhtiyaarka ugu fiican wuxuu noqon karaa animations, habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagula falgalo dadka isticmaala. In kasta oo ay wakhti hore ku haysteen suuqa nashqadeynta iyo dhaqdhaqaaqa, haddana wali waxay u muuqdaan inay abuuraan aragti hal-abuur ah oo ku saabsan meheradaha ay suurtagal tahay in laga helo, taas oo ah, inaan xisaabtanka noocan ah ku xisaabtami karno markaan diyaarinno madax loogu talagalay websaydhkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Isbeddellada Naqshadeynta Webka: Waxyoon loogu talagalay Madaxa Hal-abuurka